NR-CY558G Refrigerator - Panasonic
အစားအစာများကို လတ်ဆတ်ကြာရှည်ခံစေရန် ထိန်းထားပေးသည့် တိကျသောအပူချိန်
Panasonic ၏ တမူထူးခြားသော အအေးပေး နည်းပညာက အကန့်တိုင်းတွင် အကောင်းဆုံးအပူချိန်ကို ထိန်းထားပေးသည်။ အစားအစာများကို ၎င်းတို့နှင့် သင့်လျော်သည့် အပူချိန်ဖြင့် သိမ်းထားပေးနိုင်သည့်အတွက် လတ်ဆတ်မှုနှင့် အရသာရှိမှုတို့ကို အပြည့်အဝ ထိန်းထားပေးသည်။
*အသုံးပြုသည့် အခြေအနေအလိုက် အပူချိန်ကို ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
မကြုံဖူးသေးတဲ့ လတ်ဆတ်မှုအရသာကို ခံစားရယူလိုက်ပါ။
သာမန်ရေခဲသေတ္တာများမှ အစားအသောက်များကို -18˚C နှင့် -20˚C တွင် အေးခဲပေးသော်လည်း Prime Fresh Freezing(ထိပ်တန်းလတ်ဆတ်သည့်အအေးပေးစနစ်) သည် -3˚C တွင်သာ အပျော့စားအေးခဲစေသောကြောင့် မာကြောသွားခြင်းမရှိပါ။ သားစိမ်း၊ငါးစိမ်းများသည်ပင် ၄င်းတို့၏အကောင်းဆုံးအခြေအနေတွင်သာရှိနေသောကြောင့် ပါဝင်သော အာဟာရဓါတ်ပါဝင်မှုနှင့် အရသာ၊ အပျော့အမာအနေအထားတို့ကို အမြဲထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
(-3˚C ထိပ်တန်းလတ်ဆတ်သည့်အအေးပေးစနစ် သည် အဆင်ပြေဆုံး ဖြစ်သည်။)
1. ပြန်လည်အရည်ပျော်အောင် မလုပ်ဘဲ ချက်ပြုတ်ခြင်း
အစားအစာ၏ အပေါ်ယံ မျက်နှာပြင်ကိုသာ အေးသွားစေခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ၎င်းကို အရည်ပျော်သည်အထိ မစောင့်ဘဲ အလွယ်တကူပင် ဖြတ်တောက်နိုင်သည်။
2. ပိုမိုကြာရှည်စွာထိန်းထားနိုင်မည့် အရသာ
အစားအစာကို နဂိုအခြေအနေအတိုင်းနီးပါးဖြစ်အောင် ထိန်းသိမ်းပေးထားသည့်အတွက် မူလ အနံ့အရသာအတိုင်း ရှိစေပါသည်။
3. အာဟာရဓာတ် ထိန်းထားပေးခြင်း
အရည်ပျော်အောင်လုပ်ရန် မလိုတော့သဖြင့် ရေစက်များ မကျတော့ပေ။ ထိုကြောင့် အာဟာရဓာတ်များနှင့် အရသာများ ရောပါဆုံးရှုံးသွားခြင်းမရှိတော့ပါ။
အနံ့ဆိုးထွက်ခြင်းကို လျှော့ချပေးသည့်အတွက် အနံ့အသက်များ ပြန်နှံ့မည်ကို စိုးရိမ်ရန် မလိုတော့ပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထည့်စရာ အကန့်သည် အသီးအရွက်များနှင့် သစ်သီးများ အချိန်ကာလကြာမြင့်စွာ လတ်ဆတ်နေစေရန် စိုထိုင်းဆမြင့်မားမှုနှင့် ပုံသေ အပူချိန်တို့ဖြင့် အကောင်းဆုံးသော အခြေအနေများတွင် သိမ်းထားပေးပါသည်။
* Panasonic ကုမ္ပဏီတွင်းသုံး အချက်အလက်များ
သေသပ်စွာ သိမ်းဆည်းရန်အကန့်ပါရှိပြီး အနံ့များ မရောနှောစေခြင်း
သပ်ရပ်ပြီး ပိုင်းခြားထားသော သိမ်းဆည်းသည့်နေရာများပါရှိပြီး ပို၍ ပိုးမွှားကင်းစင်စွာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ရန် အနံ့အသက်များ မပျံ့နှံ့အောင် သီးခြား အကန့်များက ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
ငွေသည် ပိုးမွှားများကို စွမ်းအားပြည့် ဆန့်ကျင်တိုက်ထုတ်သော စွမ်းအင်ရှိပြီး ရေခဲသေတ္တာအကန့်အတွင်းမှ မှိုများနှင့် ပိုးမွှားများကို 99.9%*² သေစေနိုင်သည်။ ထိုစွမ်းအင်သည် အမြဲနီးပါးရှိနေသည့်အတွက် ၎င်းကို အစားထိုးရန်မလိုအပ်ပါ။ ထို့ပြင် သက်ဝင်လုပ်ဆောင်နေသော အင်ဇိုင်းသည် မနှစ်မြို့ဖွယ် အနံ့များကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးပါသည်။
*² Boken Quality Evaluation Institute မှ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ရရှိထားသည်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု မှတ်တမ်း နံပါတ်- No. 20215058561-1
စတိုင်ကျလှပသော၊ လက်တွေ့အသုံးဝင်သော တံခါးနှစ်ချပ်
ခေတ်မီပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိစေသည့်အပြင် အသုံးပြုသူများ အဆင်ပြေရေးအတွက် စတိုင်ကျလှပသော တံခါးများဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ နေရာကျဉ်းသည့် အခါ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်စေရန် တံခါးဖွင့်သည့်အခါ နေရာမယူစေရန် ဖန်တီးထားပါသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့သည် လေအေးများအပြင်သို့ ထွက်ခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်ရန် ကူညီသောကြောင့် ၎င်းတို့သည် စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းကိုလည်း ထောက်ပံ့ကူညီပေးပါသည်။
ကြည့်ရှုရလွယ်ကူသော၊အံဆွဲပုံစံ အမျိုးအစား အောက်ခြေရေခဲစက်
အံဆွဲပုံစံ အမျိုးအစား ရေခဲစက်သည် အဆင်ပြေပြေဖြင့် အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်စေသည်။ ၎င်းသည် နိမ့်သည့်အတွက် ကြီးမားလေးလံသော အရာများကိုပင် ထည့်ရ၊ ထုတ်ရလွယ်ကူစေပါသည်။ သင်လိုချင်သည့် အရာကို ရှာဖွေရန် ပစ္စည်းများကို ငုံ့ကြည့်ရခြင်းကိုလည်း ယခင်ကထက် ပိုမိုလွယ်ကူစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပစ္စည်းများစွာကို သိမ်းဆည်းထားသည့်အခါတွင်ပင် သင်ဝယ်ခဲ့သည့် အစားအစာကို အသုံးပြုရန် သို့မဟုတ် သင့်တွင်ရှိပြီးသားတစ်ခုခုကို ဝယ်ရန် အလွယ်တကူ မေ့လျော့တော့မည်မဟုတ်ပေ။
အသုံးပြုရ လွယ်ကူသော အပေါ်ပိုင်း ဒီဇိုင်း
မကြာခဏ အသုံးပြုရသည့် ရေခဲသေတ္တာအကန့်မှာ ထိပ်ပိုင်းတွင်ရှိပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက် အကန့်သည် အလယ်ဗဟိုတွင်ရှိသောကြောင့် သင်သည် ပစ္စည်းများကို ထည့်သည့်အခါတိုင်း သို့မဟုတ် ထုတ်သည့်အခါတိုင်းတွင် ကုန်းကွနေရန် မလိုတော့ပေ။
သပ်ရပ်ကောင်းမွန်သော ဖန်သားအတိ ဒီဇိုင်းပုံစံ
တံခါးနှစ်ချပ်၏ ကျက်သရေရှိမှုနှင့် နောက်ခံတွင် အရောင်ထည့်ထားသော ထွင်းဖောက်မြင်နိုင်သည့် ဖန်သားက သင်၏ အမြင့်ဆုံးသော လူနေမှုပုံစံကို ပြီးပြည့်စုံစေပါသည်။ လှပနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော ဒီဇိုင်းဖြစ်စေရန် ဘောင်များ၊ ပွတ်တိုင်များ သို့မဟုတ် အခုံးအချိုင့်မရှိဘဲ ရိုးရှင်းစွာဖြင့် တစ်ခုတည်းသာ အသုံးပြုထားသည့် ဖန်သားပန်နယ်များ ပါဝင်ပြီး လှပတင့်တယ်စွာ ပုံသွင်းထားသည့် လက်ကိုင်များ ပါရှိသည်။ Electrostatic Touch Control ပန်နယ်တွင် လှပသည့် အသွင်သဏ္ဍာန်ကို ပေးစွမ်းသော မှန်သားအကွပ် ပါရှိသည်။
ECONAVI သည် အသုံးပြုသည့် အခြေအနေကို ထောက်လှမ်းပြီးနောက် အအေးဓာတ်ကိုအကောင်းဆုံး ထိန်းသိမ်းပြီး စွမ်းအင်ဖြုန်းတီးခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရန် ထိုအချက်အလက်များကို ပိုင်းခြား စိစစ်ပြီး တုံ့ပြန်မှုပြုလုပ်ပါသည်။
*¹ < Test conditions > Panasonic ကုမ္ပဏီတွင်းသုံး ဒေတာ။ ဝန်းကျင် အပူချိန်- 32˚C၊ ရေခဲသေတ္တာ၏ အပူချိန်သတ်မှတ်ချက်သည် “MED” ဖြစ်သည့်အခါ။ တံခါး အဖွင့်/အပိတ်လုပ်သည့် ကြိမ်နှုန်း- ရေခဲသေတ္တာအကန့် 35 ကြိမ်၊ ရေခဲခံအကန့်7ကြိမ်။ ဝန်- ရေခဲခံအကန့်ထဲတွင် 500g ရှိ စမ်းသပ်အထုပ်များ၊ ရေခဲသေတ္တာအကန့်ထဲတွင် 2.0L ရှိ ရေ။ မီးပြတ်သွားလျှင် ECONAVI လုပ်ဆောင်ချက်များက ပုံမှန်အတိုင်း အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ
*² ရေခဲခံအကန့်နှင့် ရေခဲသေတ္တာအကန့် နှစ်ခုစလုံးအတွက် အပူချိန်ကို [MED] အဖြစ် သတ်မှတ်ထားမှသာလျှင် ECONAVI က အလုပ်လုပ်ပါသည်။
အာရုံခံစနစ်4မျိုးက အတူတကွ လုပ်ဆောင်သည်
ECONAVI အာရုံခံစနစ် လေးမျိုးက သေချာ အအေးပေးနိုင်ရန်နှင့် စွမ်းအင်ပြုန်းတီးခြင်း မဖြစ်စေရန် အသုံးပြုမှု အခြေအနေများကို ရှာဖွေထောက်လှမ်းပြီး အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်သည်။ ဤ ECONAVI ၏ လေ့လာဆန်းစစ်ချက်ကို သုံးပြီး INVERTER က မော်တာ လည်ပတ်သည့် ကြိမ်နှုန်းကို ချိန်ညှိကာ စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက် အအေးပေးသည့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
အသုံးမပြုသည့်အခါ Night Eco စနစ်က အအေးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို လျှော့ချပေးသည်
ညအချိန် ရေခဲသေတ္တာကို အသုံးမပြုချိန်တွင် ပတ်ဝန်းကျင် အလင်းစူးရှမှုကို ရှာဖွေပေးသည့် အလင်းအာရုံခံစနစ်ကို သုံးပြီး Night Eco စနစ်က အအေးပေးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို လျှော့ချပေးသည်။
Smart Eco စနစ်က သင်၏ နေ့စဉ်ဘဝနှင့် ကိုက်ညီအောင် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ပေးသည်
AI နည်းပညာကို အသုံးပြုထားပြီး ECONAVI စနစ်က သိမ်းဆည်းသည့်ပမာဏနှင့် တံခါး အဖွင့်/အပိတ်လုပ်သည့် ကြိမ်နှုန်းကို3ပတ်ကြာအောင် မှတ်သားကာ နေ့စဉ် အချိန်တိုင်း အသုံးပြုသည့် အခြေအနေကို လေ့လာဆန်းစစ် ခန့်မှန်းပေးပါသည်။ ဤခန့်မှန်းချက်နှင့် အမှန်တကယ် အသုံးပြုသည့် အခြေအနေများပေါ်တွင် အခြေခံပြီး ၎င်းက အကောင်းဆုံး အအေးပေးနိုင်စေမည့် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆုံးဖြတ်သည်။
INVERTER သည် အခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီသင့်လျော်စေရန် စွမ်းအားကို ပြောင်းလဲပါသည် - ၎င်းကို မကြာခဏ အဖွင့်၊ အပိတ်လုပ်ချိန်တွင် စွမ်းအား ပိုမိုသုံးစွဲပြီး အသုံးနည်းသည့် ညအချိန်တွင် စွမ်းအားကို လျှော့၍ သုံးစွဲသည်။ ထိုရလဒ်သည် ကြီးမားသော စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ဆူညံသံအနည်းငယ်ဖြင့် အားကောင်းသော အအေးပေးစနစ်တို့အတွက် လွန်စွာ ထိရောက်မှုရှိသော လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပါသည်။
547 L (IEC 62552 Gross)